Online Baccarat - IBET369နံပါတ် ၁ အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်းဖဲဂိမ်း
ဘာ့ခရက် ဆိုတာဖဲမပွတ်ရပဲနဲ့ကို အတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ ကစာနည်းတစ်ခုပါ။ သူက ကစားဖို့လေ့လာရတာလဲ လွယ်ကူသလို ကစားရတာလဲလွယ်ကူပါတယ်။ မြန်မာကစားသမားတွေ အပျော်ဆော့တဲ့ဝိုင်းတွေမှာဆို ဘေးကကြည့်သူတွေက “ဘေးထိုး” သဘောနဲ့ကြိုက်တဲ့အိမ်ကလောင်းလေ့ရှိကြတယ်မဟုတ်လား? ဘာ့ခရက် ကလဲဒီသဘောပါပဲ။ ကစားပွဲတစ်ခုမှာ Player ရယ် ဒိုင်ရယ်ရှိမယ်။ ကစားပွဲတိုင်းမှာ “ Player အနိုင် “ ၊ “ Banker အနိုင် “ ၊ “သရေ” ဆိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေ ၃ခုရှိပါတယ်။ ဒီမှာသတိထားရမှာက Player ရော Banker ရောကို ကစားဝိုင်းကိုင်သူက ထိန်းချုပ်ရတာပါ။ ပါဝင်သူတွေက Player ဘက်ကလောင်းမလား? ဒိုင်ဘက်ကလောင်းမလား? သရေကျမယ်ဆိုပြီးလောင်းမလား ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ဘေးထိုးသဘောမျိုး ဖဲမကိုင်ပဲလောင်းကြေးထပ်ရတာပါ။
ကိုယ့်အနေနဲ့ Bankerရော Player ဘက်ရောကြိုက်တဲ့တစ်အိမ်လောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာသိပါ။
တခြားဖဲကစားနည်းတွေနဲ့ဆိုရင် ကိုယ်က Player ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်နိုင်ဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ရတယ်။ဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က ၂အိမ်လုံးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တက်ရပါတယ်။ ဘယ်အိမ်က ဘယ်နှစ်ပွဲနိုင်ထားတယ်၊ နောက်ပွဲတော့ဘယ်အိမ်နိုင်လောက်မယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းပြီး Banker ၊ Player ကြိုက်တဲ့တစ်အိမ်ဘက်ကလောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လို့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေရင်လဲ ၂အိမ်လုံးဘက်ကလောင်းလို့ရပါတယ်! လောင်းကြေး တော့မတူစေနဲ့ပေါ့၊ တကယ်လို့ Player ဖြစ်ဖြစ် Banker ဖြစ်ဖြစ်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်က အရင်းပြန်ရနိုင်ပေမယ့် သရေကျသွားရင်တော့ ၂အိမ်လုံးလောင်းကြေးကိုဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတစ်ပွဲအတွက် လောင်းကြေးတွေကိုတော့ ကဒ်တွေမဝေခင်မှာပဲ တင်ခွင့်ရှိတာပါ။
လောင်းကြေးတွေတင်ပြီးသွားလို့ပွဲစတော့မယ်ဆိုရင် Player ရော Banker ရောကို ကဒ် ၂ကဒ်စီဝေပါတယ်။ ဝိုင်းကိုကိုင်တဲ့သူက Player ဘက်ကိုတစ်ကဒ်အရင်ဝေပါတယ်။ ပြီးတော့မှ Banker ဘက်ကိုတစ်ကဒ်၊ Player တစ်ကဒ် နဲ့အစဉ်လိုက်ဝေပြီးတော့ ကဒ်တွေအကုန်လုံးကိုလှန်ပြီးဝေရပါတယ်။ ပွဲစစခြင်းမှာတော့ Player ရော Banker ရော ၂ကဒ်စီရှိနေမှာပါ။
10 နဲ့ K, Q, J ကဒ်တွေက 10 တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
Ace (A) ကဒ်ကို 1 လို့တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပါတယ်။
ရှမ်းကိုးမီး သဘောအတိုင်းပဲ ကဒ်တွေပေါင်းလို့9ထက်ကျော်သွားမယ်ဆိုရင် နောက်ကိန်းတန်ဖိုးကိုပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အနိုင်ရဖို့အတွက်9နဲ့ပိုပြီးနီးစပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Natural Win ဆိုတာတော့ ရှမ်းကိုးမီး မှာဆို “ဒို” လို့ခေါ်မှာပါ။ ပထမဆုံးဝေတဲ့ ၂ကဒ်ပေါင်းချင်းက 8 (သို့)9ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် natural win လို့သတ်မှတ်ပြီး ကစားပွဲကပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Player ရော Banker ရောနှစ်ဖက်လုံး Natural Win ချင်းတူနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကြီးတဲ့ နံပါတ်ကအနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး နံပါတ်ပါတူနေရင်တော့ သရေသတ်မှတ်ပါတယ်။
တစ်အိမ်အိမ်ကသာ Natural Win ရနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ထပ်ဆွဲစရာမလိုတော့ပဲ ကစားပွဲကပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ Player ဘက်မှာ0–5ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ကဒ်ထပ်ဆွဲပါတယ်။6–7ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ မဆွဲပဲရပ်ပါတယ်။Player အတွက်ကတော့ ထပ်ဆွဲဖို့အတွက် စည်းမျဉ်းရိုးရှင်းပေမယ့် နောက်ဆုံးမှဆွဲရတဲ့ Banker ကတော့ ကြည့်ရတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ် အကယ်၍ Banker က
● 8 (သို့)9ဆိုရင်တော့ Natural Win ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲစရာမလိုပါ။
●2(သို့)2ထပ်နည်းမယ်ဆိုရင်တော့ Player ရဲ့တတိယကဒ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်ဆွဲကိုဆွဲရပါတယ်။
●3ဖြစ်နေပြီး Player ရဲ့တတိယကဒ်က 8 မဖြစ်ဘူးဆိုရင် တစ်ကဒ်ထပ်ဆွဲရပါတယ်။
●4ဖြစ်နေပြီး Player ရဲ့တတိယကဒ်က 0, 1, 8,9မဖြစ်နေရင် တစ်ကဒ်ထပ်ဆွဲရပါတယ်။
●5ဖြစ်နေပြီး Player ရဲ့ တတိယကဒ်က 4, 5, 6,7ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် တစ်ကဒ်ထပ်ဆွဲရပါတယ်
●6ဖြစ်နေပြီး Player ရဲ့ တတိယကဒ်က 6,7ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် တစ်ကဒ်ထပ်ဆွဲရပါတယ်
●7ဖြစ်နေရင်တော့ မဆွဲပဲရပ်ရပါတယ်
ဒါတွေကိုလဲ သိထားရုံနဲ့ပဲလုံလောက်ပါတယ် ဝိုင်းကိုင်သူက ဒီစည်းမျဉ်းတွေနဲ့အညီ ဆွဲသင့်ရင်ဆွဲ ရပ်သင့်ရင်ရင် Auto လုပ်ပေးသွားမှာမို့ပါ။
စတဲ့အချက်တွေကြောင့်အပြင်ဝိုင်းတွေမှာသာဆော့ရင်စည်းမျဉ်းအကြောင်းငြင်းခုန်စရာတွေ၊ ဝိုင်းကိုင်သူရဲ့ အမှားတွေရှိနိုင်တာကြောင့် ကစားသူဘက်ကဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ သေသေချာချာစနစ်နဲ့တွက်ချက်ထားတဲ့ Baccarat ကစားနည်းကို နိုင်ငံအနှံ့ကတခြားကစားသူတွေနဲ့သာကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အွန်လိုင်းကာစီနို တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ibet369 မှာဆော့ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဖုန်းနဲ့လဲကစားနိုင်သလို Computer မှာဆိုရင်လဲ Browser ထဲကပဲကစားနိုင်တာကြောင့် အရမ်းကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လွယ်ကူစွာဆော့ကစားနိုင်မှာပါ။